အချက်အချာ - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များစုဆောင်း၊ Martech Zone
သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကိရိယာများပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်ဗဟိုအစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ ငါသိသောစျေးကွက်သမားအများစုသည်ဒေတာများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အချိန်များစွာကုန်လွန်ကြသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့ရန်လိုအပ်သည့်အစီရင်ခံစာများကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည်။
အချက်အချာ - အချက်အလက်ရင်းမြစ် ၅၀၀ ကျော်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
Funnel သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်၊ အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီစေရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန်နှင့်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်ရန်အသင့်ရှိသည့်စီးပွားရေး - အသင့်ဖြစ်သည့်ဒေတာများကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ရန်အရင်းအမြစ်အားလုံးမှရှုပ်ထွေးသောအချက်အလက်များကိုရယူသည်။
Funnel သည် coding သို့မဟုတ် manual maintenance အတွက်မလိုအပ်ပါ။ စျေးကွက်သမားများအား data model အသစ်များ၊ စီးပွားရေးယုတ္တိဗေဒနှင့်နည်းဗျူဟာအသစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား point-and-click control ကိုပေးသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအိုင်တီသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများအားမစောင့်ဘဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် - နှင့်နည်းပညာအဖွဲ့များသည်တန်ဖိုးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအလုပ်များမှလွတ်မြောက်လာသည်။
စုဝေး - သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများအားပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် Funnel သည်မည်သည့်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်မှမဆိုသင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းသည်။ ဒေတာအရင်းအမြစ်များ
Transform - လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းခြင်း၊ မြေပုံဆွဲခြင်းနှင့်အချက်အလက်များကို Funnel ၏အစွမ်းထက်သောအချက်အလက်မြေပုံတွင်ပြသပါ
အစာ - သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်ကိရိယာသို့မဆိုထည့်ပါ။ သင်၏စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးကိရိယာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များဖြင့်အင်အားဖြည့်ပါ။ သင်၏အချက်အလက်သိုလှောင်ခန်း၊ ဒိုင်ခွက်ဖြေရှင်းချက်၊ ဂူဂဲလ်ဒေတာစတူဒီယိုသို့မဟုတ်စာရွက်များသို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနေသောအခြားမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။
Funnel Demo ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ
Funnel ဒေတာများကို Destinations
API နှင့် Data Warehouse - ဒေတာကိုသင်၏သိုလှောင်ရုံသိုမဟုတ် back-end စနစ်ထဲသို့ထည့်သွင်းပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထောက်လှမ်းရေး - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များကိုသင်၏ BI စနစ်ထဲသို့ထည့်ပါ။
Dashboards & အစီရင်ခံစာများ - သင်၏စျေးကွက်အချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူဒိုင်ခွက်များနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုပြုလုပ်ပါ။
Google Analytics - ကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ်အချက်အလက်ကိုတင်ပါ Google Analytics.
Google ကဒေတာများစတူဒီယို - သင်၏အချက်အလက်များကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ Google ကဒေတာများစတူဒီယို.
Google က Sheet များ - သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်အားလုံးကို upload လုပ်ပါ Google က Sheet များ.
ကြည့်ပါ - ပါဝါ ကြည့်ပါ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာဒေတာအားလုံးနှင့်အတူ။ အချက်အလက်များကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းစတင်ပါ။
မိုးစ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအချက်အလက်များကိုပလက်ဖောင်း ၅၀၀ ကျော်မှအစာကျွေးပါ မိုးစ
စားပှဲ - အလိုအလျောက်ကြွယ်ဝစေ စားပှဲ သင်၏စျေးကွက်အချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူ Funnel ၏တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းမှုကိုအသုံးပြုသည်
အချက်အလက်ဒေတာအရင်းအမြစ်များတွင် 2dehands, 2ememain, 2Performant, 360, 7Pixel, Act-On, ActBlue၊ ActiveCampaign, Acuity စီစဉ်ခြင်း, Ad Up ကိုနည်းပညာ, Ad4Game, ad4mat, ADARA, Adblade, adcash, AdColony, AdDeals ကွန်ယက်, Adelphic, adestra, Adform, Adikteev, Adjust, Admarvel, Admitad, Adobe Advertising Cloud, Adobe Analytics, Adobe Campaign, Adperio, AdReady , AdRcord, AdRoll, Adservice, AdSpree မီဒီယာ, Adswizz, ဆွဲဆောင်မှု, Adviral, AdWords, Adzuna, Affiliate Window, ကြွယ်ဝသော, Airship, Allani, Alltomlinser, Amobee, AMOMA, Amplitude, Apple Search ကြော်ငြာများ, Applovin, appnext, AppNexus, Apprl, , Apsis, crcédula, ukerukereső, AspireIQ, အင်တာနက်တွင် AT, AutoRentals, AvantLink, Awin, Baidu, Bam-X, Band, BARB, Basis DSP, BDX, Beeswax, Bencom, Beslist CPS၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော Impression၊ Biano, BidTheatre, Billiger.de , Bing၊ Bing ဟိုတယ်ကြော်ငြာ, Bluecore, Booking.com, BrightRoll DSP, Bronto, Button, BuySellAds, ကိတ်မုန့်, ​​CallerReady, CallRail, Campaign Contribution, Campaign Monitor, Capterra, Care Verlag, CATCHYS, Ceneo, ChannelPilot, ChartBoost, Cherchons, ChineseAN.com, Choozle, CityAds Media, CJ Affiliate, ClickSend, ClickTripz, Clickwise, clixGalore, Close, Commission Factory, communicationAds, Comparer, Compari, Connexity, Contactability, content.ad, Contobox, Conversant Access, Convirza, Cordial, Criteo, CrossInstall, Cruise Critic, Custobar, customer.io, cybba, Dable, Daisycon, DataLift360, Datalot, dataxu, Daum, DeepIntent, Delta Projects, Depo.hu, DerbySoft, DialogTech, Dianomi, Digital Advisor, Digital Turbine, Direct Digital, district m, Division-D, Domodi, DoubleClick Bid Manager, DoubleVerify, Drippler, dstillery, Effiliation, Effinity Martech, Emarsys, Emetriq, Emma, Eperflex, Eskimi DSP, Everflow, Everquote, everysize., Evilia, EXTOLE, Eyereturn, Facebook Ads, Facebook Page Insights, Facebook Pages, FareCompare, Fashionchick, Favi, Feedonomics, FinanceAds, flashtalking, Fyber, GAMEKIT, Geizhals, Genius Sports, Getprice, GetYourGuide, Glami, GlobalWide Media, GO2MOBI, Google AdSense, Google Analytics, Google Hotel Ads, Google My Business, Google Search Console, Google Sheets, GroundTruth, Groupon, Guenstiger, Gumtree, Hardware.info, Hawk, HealthCare.com, Heureka.cz, Heureka.sk, Hintaopas, Hintaseuranta, Hivewyre, homefacts, Homelook.it, HomeTiger, houzz, HubSpot Contacts, IBM Watson, Iconosquare, imedia, Impact, Indeed, Ingenious Technologies, inHaus, Innovid, Inside Response, InsightSquared, Instagram Insights, Integral Ad Science, Integrate, intelliAd Performance Marketing Suite, Intent Media, iPinYou, ironSource, ironSource Aura, ividence, Jampp, Jetcost, Joblift, Jobrapido, jobtome, Jodel, jooble, JSwipe, Jubna, JUMP RAMP GAMES, Kajomi, Kayak, Keap, Kelkoo, Kenshoo, Keywee, KickBack, Kieskeurig, Klaviyo, Kochava, Ladenzeile, Ladybug.com, Lamoda.pl, Lead Alliance, Leadbolt, Liftoff, Ligatus, Liligo.com, Line, LinkConnector, LinkedIn, LinkPrice, Linkwise, Lionshome, LiquidM, Listenloop, Listrak Email, LiveIntent, LiveRamp, Livingo, Lockerdome, LS Direct Mail, Lyst, M, P, Newmedia,, Madison Logic, Magento, Mailchimp, Maileon, Manage, Marin Software, Marketo, Marktplaats, Maropost, Match2One, MDirector, Media Buying Systems, MediaAffairs, MediaAlpha, MediaMath, Mediaocean, mediatool, Meetrix Online, Meilleur Vendeur, Mention Me, Meta I/O, Metalyzer, MGID, MiQ, Mixpanel, Mobvista, Moloco, momondo, Moz, MyBestBrands, Myshopping, myTarget, NAF Digital, Najnakup, Narrativ, Natural Intelligence, Naver, NetAffiliation, NetRefer, Neustar, neuvoo, NewHomeSource Professional, Nextdoor, Nosto, Oath, OBI4wan, Okazje, Olcsóbbat, One by AOL, ONMARUS, Ortec Adscience, Outbrain, OUTTRA, ownerIQ, pandora, Partner-ads, Partnerize, Pazaruvaj, PCH, PeekYou, PeopleFinder.com, Pepperjam Ascend, Perfect Audience, Perform Media, Performission, Plista, Pocket, Podio, Post Affiliate, Jeeng (formerly PowerInbox), Powerspace, Preis.de, Pricepanda, PriceRunner, Pricespy, Prisfakta, Prisguiden, Prisjagt, Prisjakt, ProfitMax, Propel Media, PropellerAds, Pure Shopping, pushcrew, Pushnami, Quantcast, QuinStreet, Quora, QuoteWizard, Rakuten Affiliate Network, ReadPeak, ReCheckit, RecruitNow, Reddit, ReferralCandy, Refersion, Reflex Affiliates, ReMailMe, Remerge, Rentalcars.com, RENTCafé Connect, RENTCafé CRM, Renuant, Resilion, Revcontent, RichPush, Rocket fuel, Rokt, Roku Advertising, routeperfect, RTB House, RTBiQ, RTX Platform, Sailthru, SaleCycle, Salesforce Leads, Salesforce Marketing Cloud, Sanctifly, Sanoma, SelfAdvertiser, Semrush, SEOmonitor, Setser, Seznam, ShareASale, sharoo, Shenma, ShipStation, ShopAlike, Shopbot, Shopello, Shopify, Shopmania, Shopper ၏စိတ်၊ Shopping-search.jp, Shopping24, Simpli.fi, Simplifi, Sizmek Advertising Suite, Sizmek MDX, Skapiec , Snowflake, လူမှုဗေဒ, Software အကြံပေးခြင်း, Sogou, SourceKnowledge, Sovendus, Spot-A- ဆိုင်, အစက်အပြောက်, Spotify ကြော်ငြာစတူဒီယို, SpotList ဂီတ, Spoutable, အညွှန့်လူမှုရေး, သူလျှို Dialer, StackAdapt, StartApp, Startpagina.nl, STAT Search Analytics, Steelhouse, Stileo, Stripe, Stroer ဒီဂျစ်တယ်, Stylight, SureHits, Taboola, Talkable, Tapfiliate, Tapjoy, Taptica, ပစ်မှတ်စက်ဝိုင်း, အဖွဲ့လိုက်စီမံကိန်းများ, Technolutions Slate, Terminus, အဆိုပါ Talent Playbook, ကုန်သွယ်ရေးဌာန, TikTok, TimeOne စွမ်းဆောင်ရည်, Tracdelight, Tradedoubler, Tradelab, TradeTracker, ပွင့်လင်းမြင်သာသည်။ ခရီးသွားပရိသတ်၊ TravelCar၊ တုန်ခါဗီဒီယို၊ TripAdvisor, TripleLift၊ twiago,Twitter၊ uGiftideas၊ Unity ကြော်ငြာများ၊ Upravel၊ UpSnap၊ Vacatures.nl၊ ValueCommerce၊ Ve Interactive၊ Vergelijk, Vertaa, Viant, viator၊ viator၊ Vistar Media, Vizury၊ VK ကြော်ငြာများ၊ Voluum, Voxus၊ Vungle၊ Waze၊ We Love X၊ Xing Marketing Solutions, Yahoo, Yahoo Japan Search, Yandex Direct, Yandex Display, Yandex Market, Yandex Metrica, Yardi Voyager, Yelp, Yiqifa, YouAppi, Youtube, Yoyi Digital တို့ဖြစ်သည်။ , Zanox, Zbozi, Zemanta, ZeroPark နှင့် Zillow ။
Tags: apibiစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးဒေတာ apiဒေတာစုဆောင်းခြင်းဒေတာထည့်သွင်းမှုဒေတာဂိုဒေါင်ကတော့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များသတင်းပို့စားပှဲ
Chili Piper - ခဲပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အလိုအလျောက်စီစဉ်ခြင်းဆိုင်ရာ App တစ်ခု